Rugby Analamanga : nofoanana ny «Top 14» ary nosoloina “Top 16” | NewsMada
Rugby Analamanga : nofoanana ny «Top 14» ary nosoloina “Top 16”
“Niova sata, niova andriana”. Tsy ho toy ny teo aloha ny fitantanana ny rugby eto amin’ny ligin’Analamanga, ho an’ny taom-pilalaovana 2017. Novaina ny endriky ny fiadiana ny ho tompondaka eo amin’ny Elite 1 D1.
Tsy hisy intsony manomboka izao ny “Top 14”, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja rugby. Na izany aza, novaina ho “Top 16” izany, araka ny nambaran-dRavelojaona Andry (La Pie), filohan’ny ligin’Analamanga vaovao, ny faran’ny herinandro lasa teo. “Tsy nitondra fampandrosoana teo amin’ny fifaninanana ny “Top 14” satria fakana tahaka be fahatany ny fifaninanam-pirenena frantsay, izay nampiasa izany”, hoy izy. Tsy hisy izany ireo ekipa milatsaka any amin’ny Elite 2, ho an’ity taom-pilalaovana 2017 ity.
Raha tsiahivina, tokony hidina any amin’ny diviziona Elite 1 D2 ny XV Family sy ny US Ikopa saingy izao tafajanona izao indray izy ireo.
Nambaran’i Andry La Pie hatrany fa tsy hisy intsony koa ireo ekipa roa miandry avy hatrany any amin’ny manasa-dalana, toy teo aloha. Nanimba ekipa izany fa tsy maintsy mifanintsana avokoa ny fileovana miatrika ny “Top 16”. Atao mitovy daholo ny isan’ny lalaon’ny ekipa tsirairay avy.
Nifampiarahaba ny US Ikopa
Mandra-piandry ny fanombohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, nifamotoana tetsy Andohatapenaka ny fileovana Ikopa, ny alahady lasa teo, nifampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona 2017. Notsiahivina ny lalana nodiavin’ity ekipa ity, nanomboka tamin’ny taona 1940 noho mankaty. Marihina fa nahazo filoha mpitantana vaovao, amin’ny alalan’i Tom, ity fileovana ity. Fanamby apetraky ny US Ikopa ny handrombaka ny ho tompondakan’Analamanga sy i Madagasikara. Marihina fa nanolotra fanamiana vaovao ho an’ny klioba i Tom ka ankoatra ny loko mavo sy mena ary maitso, nahalalana ity klioba ity, notovanana fotsy koa izany, araka ny fangatahan’ny mpanolotra. Ny fotsy, mariky ny fahadiovana sy ny haja na eo amin’ny fitondrantena amin’ny maha olona na ny fomba filalao eny ambony kianja.